भिडियो मार्केटिंग वर्क्स | Martech Zone
भिडियो मार्केटिंग वर्क्स
सबैले आफ्नो वर्ष-अन्त भविष्यवाणी गरिरहेको छ। मलाई लाग्दछ कि तपाईं सबै हुपला फोरगो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको मार्केटिंग रणनीति कार्य गर्न सक्नुहुन्छ आउँदो बर्षमा सबै तथ्यहरूमा आधारित। बहु-च्यानल रणनीतिहरू, मार्केटि auto स्वचालन, मोबाइल र भिडियो तपाईंको व्यवसायमा सment्लग्नता र ट्राफिक ड्राइभ गर्न जारी राख्दछ। यहाँ शानदार तथ्या with्कहरूको साथ एक महान इन्फोग्राफिक छ जुन २०१ 2014 मा औपचारिक भिडियो मार्केटि strategy रणनीति कार्यान्वयन गर्न तपाईंको आवश्यकतालाई समर्थन गर्दछ।
डेलोस इन्कर्पोरेटेड यी साझेदारी गर्दछ भिडियो मार्केटिंग सल्लाहहरू:
योजना - भिडियो तपाइँको समग्र विपणन योजना को एक हिस्सा हुनु पर्छ, एक सगाई रणनीति जसले तपाइँको लक्ष्य लाई समर्थन गर्दछ। उत्कृष्ट भिडियो उत्पादन पर्याप्त छैन - तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ! तपाइँका लक्ष्यहरू पहिचान गर्नुहोस् - चाहे उनीहरू चेतना बढाएर वा व्यवसाय चलाउँदै - र तपाइँको सफलताको मेट्रिक्स स्थापना गर्नुहोस्।
उत्पादन गर्न - तपाईंको लक्ष्य बजार को हो र तपाईंको बजेट के हो? एकचोटि तपाईंले यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएपछि, एक भिडियो उत्पादन कम्पनी खोज्नुहोस् जसले तपाईंको जीवनलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। सन्तुष्ट ग्राहक वा तपाईंको अनौठो सेवाहरू हाइलाइट गर्ने बारेमा सोच्नुहोस्।
प्रबर्धन - तपाईंको सामाजिक टोपी राख्नुहोस् र साझेदारी सुरू गर्नुहोस्! तपाईंको ग्राहकहरु कहाँ ह्या hang्ग आउट गर्छन्? तिनीहरूलाई खोज्नुहोस् र शब्द फैलाउनुहोस्। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गुगल +, युट्यूब…
टैग: सिस्कोडेलोज समावेशएलोक्वाemarketerफेसबुकफेसबुक भिडियोइंफोग्राफ़कइन्टर्नेट रिटेलरविपणन शर्पामार्केटिंग भिडियोहरूधुंध मिडियाभिडियो रूपान्तरणभिडियो संलग्नताभिडियो मार्केटिंगभिडियो विपणन रणनीतिभिडियो योजनाभिडियो पीआरभिडियो उत्पादनभिडियो पदोन्नतिभिडियो रणनीतिभिडियोYouTube